Semalt: Indlela Yokuqhafaza IWebhu Page Ukusebenzisa i-Google Chrome Extension
I-screen scraper ibhalo elifunda amasayithi kunye neenkcukacha ezisebenzayo kwiwebhu. Ukukhwa kwesikrini yisisombululo esiphezulu sokufumana idatha yangempela kwiiwebhusayithi kunye namaphepha ewebhu kwi-Microsoft Excel. I-Google Chrome Extension Scraper yindlela enamandla yokukhangela isikrini esisebenza kwiWindows kunye ne-Mac OS.
Kutheni iGoogle Chrome Extension Scraper?
Ukongezwa kweGoogle Chrome isicatshulwa esinamandla esinokukhangela isikrini kwi-Chrome Web Store. Isixhobo sokucoca sifakwe kwisiphequluli se-Chrome njengeplagin. I-plugin ivumela iibloggers kunye nabathengisi ukuba bafumane idatha ukusuka kumaphepha ewebhu ngokuchofoza ngokuchanekileyo kwinto. '' I-Scrape Similar '' ifanele iqale kwikhompyutheni ukuba unqakraza iqhosha lento.
I-XPath yolwimi lwenkqubo esetyenziselwa ukufumana ulwazi olubalulekileyo kwi-XML izakhiwo. Ifayile ye-HTML ngumzekelo obalaseleyo wesakhiwo se-XML. I-XPath isetyenziswa ngokuqhelekileyo ekukhetheni iinombolo ezijoliswe kuzo. Kule ngongoma, i-XPath iya kusetyenziswa ukuchonga isicatshulwa sokukhishwa kwiphepha lewebhu. I-XPath iya kunceda ukunceda amagama amaphepha kunye neenombolo zefowuni zamaPhalamende aseSweden.
Ukusebenzisa i-Google Chrome yokukrazula ukufumana iinkcukacha zeedilesi ezingama-349 zaseMokhrasi amaPolish
Nge-Scraper ye-Chrome, ukukhipha ulwazi kwiphepha lewebhu akulula nje kuphela. Uya kuyinandipha inkqubo kunye nobuchule ngokwalo.
Iwebhusayithi ibhala onke amalungu eSweden kunye needesi zabo. Ukuze uqalise, cofa ngakwesokudla nakuphi na iPala kwaye ukhethe "I-Scrape Similar. "Umele ubone umboniso olandelayo kwisikrini sakho.
Isinyathelo ngesinyathelo sendlela yokukhenkca iphepha lewebhu
Ukuba unqakraza ngokufanelekileyo kwiPalamente enye kwaye ukhethe "Hlola izinto," uludwe lwe-alfabhethi luya kudalwa phantsi kwe "grid_6 i-alpha omega Isiphumo sophando lwesithintelo somgca "kwiklasi. Amanyathelo amabini aya kusetyenziswa ukutshitshisa le khasi lewebhu. Inyathelo elilodwa liya kuquka ukukhetha amathegi aquka idatha yePhalamende kunye ne-XPath. Inyathelo lesibini liya kubandakanya ukukhetha ezinye iinkcukacha zedatha ezifana namagama eqela, amagama, kunye nenombolo yefowuni kwaye uququzelele idatha kwiikholomu.
Jonga ubunzulu kwisakhiwo se-HTML uze ugcine izinto zihambelana. Phawula amathegi ukuchonga inani leetaki ezihambelana nezinto ezisesikweni sakho. Ukuchonga itekisi yokugqibela equka idatha ejoliswe kuyo. Jonga uvavanyo lwe-XPath kwisakhiwo ngokuchofoza "Scrape. "
Uluhlu olubandakanya imigangatho engama-349 luyakuboniswa kwisikrini sakho. 349 ibonisa inani elipheleleyo lamaPhalamende aseSweden.
Ukwahlula idatha echazwe kwiikholam. Hlola ikhowudi ye-HTML kwikhasi lewebhu oyisebenzisayo. Kule meko, iziqwenga ezifunekayo zikhutshwe kule mzuzwana zigqatso. Faka ii-XPath kwintsimi yekholomu eyenziwe kwaye nqakraza "Scrape" ukuqhuba iplagin.
Ukuba unolwazi olusisiseko lwe-XPath, ukuqonda inkqubo akuyi kuba ngumsebenzi onzima. Izinyathelo ezikhankanywe apha ngasentla zikhokela malunga nendlela yokukhupha iphepha lewebhu. Ukuba usebenza ekutshekeni amaphepha ewebhu amaninzi, kufuneka ube nezakhono zeprogram Source .